၁၅:၃၃၊ ၇ မတ် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ
၄၇ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၅ နှစ်
၂၁:၃၀၊ ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (The file Image:USA.png has been removed, as it has been deleted by commons:User:Fastily: ''No license since 25 August 2013: you may re-upload, but please includealicense tag''. ''Translate me!'')
၁၅:၃၃၊ ၇ မတ် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
သမ္မတရာထူးမှ အနားယူပြီးနောက် ၁၉၆၉၊မတ်လ၊၁၉၆၉၊ ၂၈ရက်တွင်မတ်လ၊ ၂၈ ရက်တွင် ဝါရှင်တန် ဒီစီတွင်ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/293910" မှ ရယူရန်